संविधान संसोधन गर्न एमाले मानेकै हो त? - राजनीति - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
संविधान संसोधन गर्न एमाले मानेकै हो त?
काठमाडौं भदौ १
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बिहिवार बिराटनगर पुगेर एमाले सहितको सहमतिमा संविधान संशोधन गरिने बताए। एमालेले विधेयकलाई निर्णायक प्रकृयामा लैजान सहमति जनाइसकेको भन्दै उनले अब विधेयक पारित गर्नसमेत एमालेले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
यस्तै, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वीरबहादुर बलायरले पनि बिहिवार मकवानपुर पुगेर कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन गर्न एमालेलाई सहमतिमा ल्याएको दावी गरे।
सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष र प्रमुख सत्तारुढ दलको बहालवाला मन्त्रीले संविधान संशोधन एमालेसहितको सहमतिमा पारित हुने दावी गरिरहेपनि विधेयक पारित गर्न उनीहरुले भनेजस्तो सहज अवस्था भने देखिँदैन।
एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे संविधान संशोधनका विषयमा एमालेको अडान पूर्ववत नै रहेको बताउँछन्। ‘संविधान संशोधनका विषयमा हाम्रो अडान फेरिएको छैन, अहिलेको आवश्यकता संशोधन होइन भन्नेमा एमाले प्रष्ट छ’, उनले भने।
पाण्डेले संविधान संशोधन विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न भने एमालेले अवरोध नगर्ने बताए। ‘हामी विधेयक पेस गर्न अवरोध गर्दैनौं, हाउसको निर्णयलाई मान्छौं तर एमालेले संशोधन विधेयकको विपक्षमा मतदान गर्नेछ’, उनले भने।
यस्तै एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले पनि संविधान संशोधनको पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको बताए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पार्टीको समेत सहमतिमा संविधान संशोधन गरिने हल्ला एमालेलाई बदनाम गराउने कोसिश भएको ढकालको तर्क छ।
‘संविधान संशोधनमा हाम्रो विमति यथावत नै छ, हामी यसको विपक्षमा छौं’, उनले भने,‘ विज्ञापनका लागि उहाँहरुले आफ्नो पार्टीको मात्र नाम लिँदा मान्छेहरुको ध्यानाकर्षण हुँदैन भनेर एमालेलाई अलिकति वदनाम गर्न खोजेका रहेछन् भने उनीहरुको नियत भदौ ५ गते बुझिहालिन्छ। ’
बुधवारको बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्तीले संविधान संशोधन विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि व्यवस्थापिका संसदमा पेस गरेपछि यतिबेला विधेयकलाई लिएर राजनीति गर्माएको छ। सत्तारुढ दलहरु विधेयक पारित हुने बताइरहेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले विधेयक पारित नहुनेमा निश्चिन्त जस्तै देखिएको छ। त्यसैले एमालेको विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न कुनै अवरोध नगर्ने तर विधेयकको विपक्षमा मतदान गर्ने तयारी छ।
विधेयकको पक्ष र विपक्षमा कति सांसद?
हाल संसदमा ५९३ जना सांसद रहेका छन्। संसदको हाल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाइका लागि ३९५ जना सांसद आवश्यक पर्छ। तर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका सरकारपक्षीय सांसदको संख्या ३८८ मात्र रहेको छ। यसमध्ये पनि राप्रपा विभाजित भएको छ।
कमल थापाले संशोधनमा सहयोग गर्ने बताएपनि पशुपति शमशेर राणाले कुनै धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन्। त्यसैले संविधान संशोधनमा दुई तिहाइ पु¥याएर पारित गराउनु सत्तापक्षका लागि निक्कै चुनौतिपूर्ण रहेको छ।
उता, आन्दोलनरत राष्ट्रिय जनता पार्टीले भने विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरेपछि पारित नभएपनि निर्वाचनमा जाने बताएको छ। राजपाले सरकारले सदनमा विधेयक पेस गरेपछि चुनावमा जानका लागि आफ्नो ‘फेस सेभिङ’ हुने निक्र्योल निकालेको देखिन्छ। पार्टीका नेता शरतसिंह भण्डारीले सत्तारुढ दल र राजपाबीच विधेयक सदनमा अगाडि बढाउने सहमति भएको दिन भनेका थिए, ‘पास–फेल जे भए पनि हामी त्यसलाई स्विकार्ने पक्षमा छौ।’
प्रकाशित १ भदौ २०७४, बिहिबार | 2017-08-17 19:37:32